Walitti Bu'iinsa Tigraay Irratti Dhaabii Biyyoota 'G7'
Ministarri Dhimma alaa Yunaayitid Isteetis, ministaroota dhimma alaa biyyoota “G7” jedhamanii, kan Kanaadaa, Faransaay, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaan fi Yunaayitid Kiingidom fi Bakka-bu’aa ol’aanaa Gamtaa Awurooppaa waliin tahuudhaan, gabaasaalee dhiheenya kana cabinsaa mirga namoomaa fi cabinsaa fi dhiittaalee seera namoomaa idil-addujyaa naannoo Tigiraay, kan Itiyoophiyaa keessatti raaw’ataman irratti bahanii ilaalchisee yaaddoo cimaa qaba.
Waraansichi baatii Sadaasa dabree, yeroo muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahimad, eega haleellaa maadhee raayyaa waraanaa Tigiraay keessaa irratti raaw’atamee booda, kan naannicha bulchaa ture Adda Bilisummaa Uummata Tigiraay yokaan ABUTn taayitaa irraa buusuun, “ol’aantummaa seeraan kabajchiisa” jechuun loltoota federaalaa gara Tigiraayitti bobbaase jalqabame.
Biyyoonni “G7” jedhaman ibsa baasaniin, ajjeechaa siivilootaa yokaan namoota hidhannoo hin qabnee, hookkara quunnamtii saalaa fi hookkara saala irratti hundaa’ee geggeessame, haleellaa otuu adda hin baasiin geggeessamee fi humnaan-buqqisuu jiraattota Tigiraay fi baqattoota Tigiraay keessaa balaaleffachuudhaann, qaamonni hundinuu kana irraa akka of dhaaban, siiviloota yokaan kanneen hidhannoo hin qabneef ittisni godhamuu, akkasumas, mirgi dhala-namaa fi seerri sadarkaa addunyaa kabajamuu akka mirkaneessan, gaafatan.
Yunaayitid Isteetisii fi waahiloonni ishee mootummaan Itiyoophiyaa kanneen miidhaalee san raaw’atan akka itti gaafataman taasisuuf waadaa seene akka hojii irra oolchu eegaa jiran.
Koomishinni Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa fi Waajirri Koomishinara Mirga Namoomaa Ol’aanaan ka Tokkummaa Mootummootaa dhiittaa mirga namoomaa qaamota hundaan yeroo waraansa Tigiraay keessaa raaw’ataman waliin qorachuuf waliigalanii jiran. Yakkawwan gabaasaman irratti qorannaan walabaa, ifagalaa fi loogii hin qabne geggeessamuunii fi kanneen dhiittaa mirga namoomaa raaw’ataman itti gaafatamoo taasisuun baay’ee barbaachisaa dha.
Yunaayitid Isteetis fi waahiloonni ishee “G7” , “qaamonni walitti-bu’insa sana keessa jiran, gargaarsa namoomaaf hatattamaa fi gufuu tokko malee akka karaa banan” jechuun gaafatan. Lafa balleensa Tigiraay walakkeessaa fi Tigraay Bahaa keessatti haalli rakkoo hatattamaa waan mul’atuuf, waa’een wabii nyaataa dhabuu hedduu yaaddessaa dha.
Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa dhiheenya kana humnoonni Ertiraa Tigiraay keessaa ni bahu, jechuun labsanii turan. Yunaayitid Isteetis fi waahiloonni ishee, deemsi bahinsa kanaa, “kan hatattamaa fi haal-duree tokko malee raaw’atamuu fi kan mirkaneeffanu danda’u” akka tahu gafatan.
Ibsi waloodhaan baasan kun, itti fufees, “hookkarri akka dhaabatuu fi deemsi siyaasaa lammiwwan Tigiraay keessaa dabalee lammiwwan Itiyoophiyaa hunda biratti fudhatamaa tahee fi gara filannoo amanamaa fi deemsa araara biyyoolessaa bal’aa tahetti geessu” akka tolfamu waamicha dhiheessa.
“Nuti miseensonni “G7” carraaqqii gargaarsa namoomaa fi qorannaalee mirga dhala-namaa geggeessamu deggeruuf qophoofnee jirra” jedhan – jechuudhaan, gulaalaan har’aa ibsa isaa xumura.